Sangano reWorld Council Of Churches Rinodoma Rev. Mtata Kuti Vatungamire Rimwe Bazi
Varimi Voyambirwa Pamusoro peChirwere Chinobata Zvipfuyo cheJanuary Disease
Nyanzvi mune zvekurima dzirikuyambira vanhu kuti vasakanganwa kuti mwedzi uno, waNdira, vakatarisa mberi, inguva yechirwere chezvipfuwo, January Disease, chinokonzerwa nezvishambwe panguva ino yekunaya kwemvura.
Mukuru wesangano iri, VaJuma Ulete, vaudza Studio7 kuti sangano iri rinoda kuona sarudzo dzakachena, naizvozvo mari yavari kuunganidza ichashandiswa mukubatsira kunyoresa vanhu kuti vavhote uye nekuchengetedzwa kwemavhoti panguva yesarudzo.
South Africa Yodzosera neChisimba kuZimbabwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri Kupinda muSouth Africa Zvisiri paMutemo
Hurumende yeSouth Africa inoti yaisa mapurisa panzvimbo zhinji mumigwagwa inobva kubhodha reBeit Bridge, chinangwa chiri chekubata vanhu vanobva kuZimbabwe vachipinda muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Zvita 29, 2021
Vamwe muZanu PF Vogunun'una Vachiti Sarudzo dzeMatunhu Hadzina Kuitwa paJekerere
Sarudzo dzebato reZanu-PF dzematunhu dzakaenderera mberi nezuro kunyangwe kune dzimwe nzvimbo vatsigiri vebato iri vaikandirana makobvu nematete kumatunhu akaita seMasvingo vachiti pane kubiridzirwa kuri kuitika.
Vanhu Vokurudzirwa Kuti Vasachengeta Mari Yakawanda Mudzimba Dzavo
Kwemwedzi mishoma yapfuura, huwandu hwembavha dzakapakata pfuti dzichipinda mudzimba dzevanhu dzichitora mari yakawanda zvikuru pamwe nekuuraya vanhu huri kuwedzera, izvo zvakonzera mapurisa kuti ayambire vanhu kuti vasachengeta mari mudzimba dzavo kana kunzvimbo dzekubasa.
Zvita 28, 2021
Archibishop Tutu Voradzikwa Musi wa1 Ndira, 2022
VaTutu vakaudza Archibishop Makgoba kuti kana vafa, vanoda kupiswa uye madota avo agochengeterwa mukereke iyi.
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, nemudzimai wavo, Amai Jill Biden, vanoti varwadziwa zvikuru kunzwa nezvekufa kwaArchibishop Desmond Tutu, vachiti VaTutu vanga vari muranda wamwari uye muranda nevanhu.
Zvita 20, 2021
MISA Zimbabwe Inosvitsa Makore Makumi Maviri neMashanu Ichishanda Munyika
Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau, reMedia Institute of Southern Africa - Zimbabwe (MISA Zimbabwe) riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu richishanda munyika.
ZIMTA Inoti Covid-19 Yava Kupararira Kubva Muzvikoro Ichienda Kumisha
Mutungamiri weZIMTA, VaRichard Gundani, vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro vanofanirwa kupiwa zvikamu zvavo zvemushonga wenhomba uye zvikoro zvinofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvose zvinodikanwa, vachiti chirwere ichi chavakupararira kubva muzvikoro chichiendeswa kumisha nevana vechikoro.
Sangano reCrisis In Zimbabwe Coalition Rinoti Vatsigiri veZanu-PF Vakarwisa Nhengo Dzaro
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu, reCrisis In Zimbabwe Coalition, rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo.
Zvita 13, 2021
Mutungamiri weSouth Africa Anozivisa Kuti Akabatwa neDenda reCovid-19
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, nezuro vakazivisa kuti vakabatwa nechirwere cheCovid-19.
Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, reState Department, rinoti ongoro yarakaita inoratidza kuti zvunhu zvikuru zvinodiwa zvinosanganisa kudzivirira hutongi hwehumbimbindoga, kurwisa huori nekukurudzira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Zvita 07, 2021
Sangano reInstitute for Public Relations And Communication Zimbabwe (IPRCZ) rinoti nhengo dzaro dzirikunetswa nevamwe vatori venhau varikuda kubhadharwa mari yechiokomuhomwe kuti vasanyora zvunhu zvisina kunaka pamusoro pemakambani avanoshandira.
Sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center (ERC) rinoti pose panoitwa sarudzo panofanirwa kutarisiswa kuti zvinochinjwa zvichinjwe kuitira kuti sarudzo dzinotevera dzigofamba zvakanaka.
Sangano reVatyairi Rinotenda Hurumende Mukuedza Kugadzirisa Zvichemo Zvaro neSouth Africa
Hurumende yeSouth Africa inonzi irikuda kudzika mutemo unosungira vatyairi vekune dzimwe nyika vose vanoshanda muSouth Africa kuti vatore marezenisi ekutyaira dzimotikari emu South Africa.